Wasiirada Cadaalada,Dastuurka iyo Waxbarashada oo maanta la wareegay xilalkooda”SAWIRO” – Radio Muqdisho
Wasiirada Cadaalada,Dastuurka iyo Waxbarashada oo maanta la wareegay xilalkooda”SAWIRO”
Munaasabadahan ay xilalka kula wareegayeen Wasiirada Cadaaladda, Dastuurka, Waxbarashada iyo Tacliinta sare, ayaa waxaa ka qeybgalay ku-simaha Ra’iisul wasaaraha, Xildhibaanno, Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka, Hanti dhowrka guud ee Qaranka, Garyaqaanno iyo xubno kale oo munaasabadda lagu casuumay ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Wasiirkii hore ee Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay, isagoo howlwadeenada ku booriyay inay la shaqeeyaan Wasiirada cusub.
Wasiirka Cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilka jiir ayaa sheegay in uu shaqada halkeeda ka sii wadi doono, waxaana uu howlwadeenada ka codsaday inay gacan ku siiyaan gudashada howlaha loo igmaday.
Wasiirka cusub ee Dastuurka Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa xusay in uu soo diyaarin doono dastuur ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, kana madax banaan koox gaar ah.
Wasiirkii hore ee Waxbarashada Mudane Ciise Axmed Guraase ayaa sheegay in ay wax ka qabteen xagga manaahijta Waxbarashada dalka.
Sidoo kale Wasiirkii hore ee Hidaha iyo Tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed ayaa sheegay inay gacan ka geysteen sare u qaadidda tacliinta sare ee dalka.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ayaa sheegay inay sii amba qaadi doonto howlihii ay horey u qabteen Wasiiradii,waxaana madaxda kale ka codsaday inay garab ku siiyaan howlaha horyaalla.
>Sawir Qaade: Qadar Cali Nuur<
Daawo Sawirada qaar kamid ah mas’uuliyiinta dowladda oo maanta saxiixay Buugga Tacsida ee Jabuuti
Daawo Sawirada qaar kamid ah mas'uuliyiinta dowladda oo maanta saxiixay Buugga Tacsida ee Jabuuti